Ndị na -enye Acid Acid Suppliers na Factory | Ndị na -emepụta China Acidity Regulators
Fumaric acid, nke a makwaara dị ka acid fumaric, acid fumaric, purpuric acid ma ọ bụ acid lichenic, bụ kristal na -enweghị agba, na -ere ọkụ, carboxylic acid sitere na butene. Fumaric acid na -atọ ụtọ dị ka mkpụrụ osisi, enwere ike ịchọta ya na Corydalis, Boletus, Lichen na agwa mmiri Icelandic. Mbukota: 1kg/akpa, 25kgs/drum (akpa rọba abụọ n'ime na akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe onye ahịa chọrọ.) Nchekwa Shel ...
DL-Malic Acid bụ otu ihe dị mkpa
Malic acid bụ ihe na -emepụta ihe nke nwere usoro molekul C4H6O5. Ọ na -enye aka na ụtọ mkpụrụ osisi na -atọ ụtọ, a na -ejikwa ya dị ka ihe mgbakwunye nri. Malic acid nwere ụdị stereoisomeric abụọ (L- na D-enantiomers), n'agbanyeghị na ọ bụ naanị L-isomer dị n'okike. Malic Acid nwere hygroscopic siri ike, soluble na mmiri na ethanol. Enwere acidity dị ụtọ pụrụ iche. 1.Mic acid nwere uto dị nso na apụl eke gbara ụka, ma e jiri ya tụnyere citric acid, yana acidity, ụtọ na nro, ogologo obibi t ...
Onye na -achịkwa Acidity BP98 Grade Crystalline Powder 99%min Sodium Citrate
Nha nha: 12-40mesh, 30- 100mesh ọkwa ọkwa BP98/usp Nkwakọ ngwaahịa: 25kg/akpa Ndụ ndụ: afọ abụọ Nkwakọ ngwaahịa & mbupu: 25kg/akpa, 25mt/20′FCL Oge Ndu: ụbọchị iri ka anatachara prement sodium citrate bụ ejiri mee ka ekpomeekpo kwalite ma jigide nkwụsi ike nke ihe ndị na -arụ ọrụ na nri na ihe ọ drinkụ inụ na ụlọ ọrụ nhicha, ọ nwere ike dochie Sodium tripolyphosphate dị ka ụdị ihe nhicha dị mma ọ nwere ike iji aloe mee gbaa ụka, ịgba, foto na plating metal. (1) N'ụlọ ọrụ nri: ...
Tartaric acid bụ kristal kristal na -acha ọcha nke na -emekarị n'ọtụtụ osisi, ọkachasị na mkpụrụ vaịn. Nnu ya, potassium bitartrate, nke a na -akpọkarị ude nke tartar, na -amalitekarị n'usoro ime mmanya. A na -agwakọta ya na sodium bicarbonate ma na -ere ya dị ka ntụ ntụ a na -eji dị ka onye na -eko achịcha na -akwadebe nri. A na -etinye acid n'onwe ya na nri dị ka ọgwụ antioxidant yana inye ụtọ ụtọ ya pụrụ iche. Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu Nkwakọ ngwaahịa: 25kg/akpa, 20mt/20 & ...
A makwaara Glycine (nke a na-akpọ Gly) dị ka amino-acetic acid. Usoro kemịkal ya bụ C2H5NO2, nke na -acha ọcha siri ike na ọnọdụ ụlọ na nrụgide. Ọ bụ amino acid nke nwere usoro dị mfe na usoro nke amino asịd na ọ dịghị mkpa maka ahụ mmadụ. Glycine bụ ụdị amino asịd na-adịghị mkpa maka ahụ mmadụ.Ndị ndebiri aha: Gly bụ usoro usoro amino acid kachasị mfe, anaghị achọ ahụ amino acid, ma ndị otu acidic na ndị na-arụ ọrụ na molekul, ca ...
Citric Acid Monohydrate/Mmiri Acid Acid
A na -ejikarị citric acid eme ihe dị ka onye na -esi ísì ụtọ, ihe nchekwa maka ụlọ ọrụ nri na ihe ọverageụverageụ. Enwere ike iji ya dị ka antioxidant, plasticizer, nchacha na kemịkalụ, ihe ịchọ mma na ụlọ ọrụ nhicha. Dị ka ihe mgbakwunye nri, Citric Acid Monohydrate bụ ihe nri dị mkpa na nri anyị. Dịka onye na -ebute ihe mgbakwunye nri na onye na -eweta ihe oriri na China, anyị nwere ike nye gị Citric Acid Monohydrate dị elu. 9.Storage na Transport: Ọ ga -echekwara na akọrọ na ventilator w ...